Maxay ka wada hadleen wakiilada beesha caalamka & saddexda madaxweyne ee DFS u bixisay horu-socod.
April 8, 2021 Xuseen 8
Puntlandtimes (MUQDISHO)-Xerada Xalane ee magaalada Muqdisho waxaa habeenimadii xalay kulan ku yeesha Wakiilada Beesha Caalamka C6+ iyo Madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle iyo Koofur Galbeed kuwaasi oo ka wada hadlay arrimaha muranka doorashooyinka dalka.
Xogihii ugu dambeeyey ee aannu ka helayno kulanka ayaa waxaa ay sheegayaan in Madaxweynayaasha Saddexda ah ee taageersan dowladda inay eedda saareen Jubbaland iyo Puntland, waxaana ay codsadeen in la fasaxo oo dib deegaanadooda ugu laabtaan.
Yaa wax diidi kara heshiiskii 17 septemper waa la fulinayaa belaa shuruud .
Soomaalidu laba ha kala deyso: inay beesha caalamka ku tiirsanaadaan dhaqaale ahaan tulaale, inay beesha khaasatan midowga yurub iyo mareykanku bixiyaan kharashka dawlada dhexe iyo dawlad goboleedyada ku baxa 90% amaba 100%. Sida mushahaarka ay qaataan voids ku, baarlamaanka, shaqaalaha dawlada, iwm. Iyo inay Soomaalidu tiraahdo beesha caalamku faraha ha nagala baxdo. Arrinkaasi wuxuu lamid yahay: qaalallaahu tacaalaa iyo qulaankaasi fas weeye is ma qaadan karaane qaalliyow kala daa. Soomaali haddaynu nahay ma rabno inaynu hal xafiis isku tashi ku dhisano; inaynu cashuurta si saxa u bixino; inaynu mushahaar la’aan ugu shaqayno si uu u soo kabto. Weliba taas waxaa ka sii daran musuqa iyo boobka baahsan ee lagu samaynayo wixii yaraa ee caalamku inoogu deeqay. Haddaba waa yaabe, ama aynu isku tashanno oo dad iska dhigno oo keligeen sida wadamada kale wax u qabsanno oo ka kaaftoonno beesha caalamka ama aynu sidii mucsur aan wax awoodsan karin meel u fadhino kuwa ina biilana aflagaadada ka deyno. Arrinkani waa run qofkasta oo Soomaali ahi ogyahay haddana qofkii ka hadla waxaa la oranayaa waa gaala raac ama caqli ma laha iwm. Waa yaabe sidee baynu wax u rabnaa? Ma waxaynu nahay dad waalan mise dad miyir qaba? Arrintaas tala ka dhiibta.
Sixid: voids ku = ciidanku
waxaa nahay dad fiyow laakiin madaxa ciida kaceshanaya
Puntlander..kaalay adigu fuli. September 17 was Last year hadana waa 2021. You need to Waka up first. Fircoon Farmaajo shalay ayuu isku Xaaray.
WAR NIN YAHOW DADKAAN FULEYSANAA. CAYBAA KASOO HARTAY. BAQDINTA WAA LAGA FAREEMAYAA KA WARAN. WAR DADKIINA RAACA NAF IYO CAQLI MIDNA MA HAYSAANE AFTER 20 YRS HADAA HALKAAN MAREYSAAN
Kkkkk. Caqlixumida maxamuud salabeen xaare xukun jecel waxeey rabaan iney ku qasbaan waraaq inuu saxiixo farmaajo….kkkkkk wasiir dube waa inuu madaxa kala dhacaa DUBE. ILAA 1960 maxamuud salabeenku siyaasad ku saleysan abeeso ayey soo wadeen war dadka si toos ah wax laqeybsada…maxamud saleeban xaare waa 35% ummada ku abtirsata majeerten weyne dadka reer Puntland waa dad xadaarad dheer yaqaan nabad iyo colaad maamul jecel. DADKA difaaca Puntland waa majeertenka kale iyo daroodka kale ee dega Puntland. Waxaa xaqiiqo ah in maxamuud salabeen xaare laga hor yimid siyaasadoda foosha xun ee ku dhisan ANIGA ANIGA taasi dhamaatey
maandhow qabiilka caydakadaa
hadaadan kadaynaynin midda tolka kadaa